Nwere ike ịchekwa ndenye iji hụ ha ma emechaa na Instagram | Gam akporosis
Instagram enyelarị gị ohere ịchekwa ndenye iji nwee ndepụta ọkacha mmasị
Nhọrọ ike ịzọpụta usoro nke ọkacha mmasịDịka ọ dị na ngwa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ndị a ga-agụ isiokwu ma emechaa, ọ na-aghọ "ga" ma ọ bụ "ga" na ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta anyị na-ejikarị kwa ụbọchị. Anyị nwere ike ịsị na enwere usoro arụmọrụ nke enyere site na ngwa ọzọ gaa na nke ọzọ ka ọ bụrụ naanị isi ọrụ ọrụ gbanwere.
Ee Instagram emelitere izu 2 gara aga Warndọ aka na ntị nke ihuenyo ma ọ bụ nseta ihuenyo emere na ngalaba "akụkọ", taa ọ na - agbanwe atụmatụ ọzọ site na ngwa ndị ọzọ ka ị nwee ike ịchekwa ndenye kachasị amasị gị na ngalaba nzuzo. Ugbu a, ị ga-ahụ ibe edokọbara n'okpuru akuku aka nri nke onyonyo na vidiyo. Site na ịpị ya, a na-agbakwunye ha na "Ndenye Ndenye" ​​nke profaịlụ gị.
A nnọọ pụtara ìhè mma na i nwere ike nweta ya na ibe profaịlụ, kpọmkwem site na ibe edokọbara na nri ya na ihe oyiyi gị. Site na ịpị ya, ị ga-enwe ike ịnweta niile ndenye na ị zọpụta na na-onwe.
Ihe ohuru nke na agbakwunye na njirimara ozo di nma dika ike igbanye ibi na Instagram n’onwe ya, obu ezie na nke a adighi enye gi ohere idoputa mgbasa ozi dika o na eme na ngwa ma obu oru ndi ozo. Na nke ahụ, Instagram na-agbakwunye ndozi na arụmọrụ zuru oke iji nye ndị ọrụ na ndị fan nke netwọkụ mmekọrịta a nnukwu ahụmịhe ọrụ.
N'ikpeazụ, ihe ọhụrụ a dị site na mmelite ị nwere ike ịchọta na Playlọ Ahịa Google. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịhụghị mmelite na ngwa gam akporo na ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo, ị nwere ike ịgafe APK site na njikọ ndị a.
Budata Instagram APK
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Instagram enyelarị gị ohere ịchekwa ndenye iji nwee ndepụta ọkacha mmasị
Ihe atọ kachasị mma nke Gboard, keyboard ọhụrụ sitere na Google
Nwere ike ugbu a na-ebi ndụ na Twitter na-enweghị Periscope